★Dizayina isitudiyo esiwina umklomelo enkabeni yeSofia★ - I-Airbnb
★Dizayina isitudiyo esiwina umklomelo enkabeni yeSofia★
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Kristina
Leli fulethi elincane lithulile futhi linothando, elisenkabeni yesikhungo somlando esimibalabala, samasiko ahlukahlukene ka-Sofia, esisebangeni lokuhamba ngezinyawo ukusuka kukho konke okuthakaselwayo, ukudla okumangalisayo, nezimakethe zabalimi.
Kufudumele futhi kuthokomele, kunokukhanya kwemvelo okuhle usuku lonke, futhi kunikeza umbono omuhle entabeni ye-Vitosha. Ngaphakathi uzothola izinsiza eziphezulu, ilineni lekhwalithi, i-cable TV, i-inthanethi enesivinini esiphezulu, izinto zokupheka nezincwadi, iwasha, isomisi, umshini wokuwasha izitsha njll.
Itholakala esakhiweni esisha sha esivikelwe kahle phakathi kwebanga elifushane lokuhamba ukusuka ezindaweni ezinomlando, izindawo zokuthenga, izitolo zokudla zezinhlanga, amathilomu e-hip, izindawo zokudlela ezisesitayeleni, nezimakethe zabalimi. Ixhumeke kahle kakhulu ezintweni zokuhamba zomphakathi. Isiteshi sesitimela esingaphansi kwe-Sofia i-Serdika iqhele ngamaminithi angu-5 kuphela ukusuka efulethini, kanti i-Vitosha high street iyimizuzu engu-7 yokuhamba ngezinyawo.
Indawo ikhanya kakhulu, ithokomele, futhi ifudumele. Ilungele abangu-2 kodwa ingalala 4. Nanku umbhede onosayizi wendlovukazi onomatilasi wegwebu lenkumbulo othokomele kakhulu. Ifulethi linakho konke okudingayo ukuze uhlale unethezekile futhi ongenakulibaleka + okwengeziwe: i-TV ehlakaniphile, ikhishi elihlome ngokuphelele elinamabhodwe, amapani, izinto eziyisisekelo zokupheka (kanye nenqwaba yezincwadi zokupheka uma udinga ugqozi), netafula elikhulu lokudlela - ilungele ukuzijabulisa noma ukumane ugobe ngenkomishi yetiye ngemva kosuku lokuvakasha.
Kukhona nenqwaba yezincwadi zesiNgisi, ikhebula le-TV, kanye nekhonsoli ye-Playstation etholakalayo ukuze uthole ukuzijabulisa kwakho.
4.98 · 244 okushiwo abanye
Ifulethi liphakathi nendawo yesikhungo somlando saseSofia, eduze kwendawo ebizwa ngokuthi i-Triangle of Tolerance (enesinagoge lendawo, i-mosque yendawo, kanye noSveta Nedelya, elinye lamasonto amahle kakhulu eSofia, phakathi kwamamitha nje. kusuka komunye nomunye). Amanxiwa asendulo asanda kutholwa aseSerdika awuhambo lwemizuzu emi-5, njengamanye amabhilidi amahle kakhulu e-Sofia - i-Central Mineral Bath (eyakhelwe ngesitayela se-Secession; okwamanje isingatha i-Sofia History Museum) kanye ne-Central Market Hall (Mhlawumbe isibonelo esihle kakhulu sika-Sofia yezakhiwo ze-Neo-Renaissance). Imakethe yegrosa endala yedolobha iqhelelene nebhulokhi, futhi isikhungo sesimanje singaphansi kohambo lwemizuzu eyi-10 ukusuka efulethini. Lena indawo yasedolobheni esafufusa enezitolo ezincane ezithokozisayo, ama-cuisines ahlukene, amathilomu e-hip, nezindawo zokudlela ezisesitayeleni.
Sitholakala ngendlela izivakashi zethu ezifuna sibe yikho - sikhona uma zisidinga futhi siqhubeke nempilo yethu sonke isikhathi.